काश्मीर : फेरि बल्झिएको भारतीय राजनीतिको ‘तातो भुङ्ग्रो’ – Chitwan Post
काश्मीर : फेरि बल्झिएको भारतीय राजनीतिको ‘तातो भुङ्ग्रो’
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अमेरिका भ्रमण गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पसँग काश्मीर मुद्दा उठान गरेसँगै प्रधानमन्त्री मोदी काश्मीर राजनीतिमा हात हाल्न अग्रसर भए । भारतीय राजनीतिले करिब ७० वर्षअगाडि गरेको गल्ती सुधार्ने भन्दै अगस्त ५ तारिखमा विधानसभाबाट अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गराउन सफल भए । भारतीय राजनीतिको ‘तातो भुङ्ग्रो’मा प्रधानमन्त्री मोदीले खुट्टा हालेसँगै जागेको काश्मीर राजनीति फेरि एकपटक विश्व राजनीतिमा ‘हट केक’ बन्दैछ ।
बेलायती सत्ताले भारत छोड्नासाथ विवादित क्षेत्र बन्न पुगेको काश्मीर भारत, पाकिस्तान र चीनको राजनीतिक छिनाझम्टीको सिकार बन्न पुग्यो । पछिल्लो समय तीन देशले बाँडेको काश्मीरको भूभाग भारततर्फ जम्मु–काश्मीर छ भने पाकिस्तान प्रशासित आजाद काश्मीर र चीन प्रशासित अक्साई काश्मीर राजनीतिक नक्सामा फेला पर्दछ । जम्मु–काश्मीर भारतको एकमात्र यस्तो राज्य हो, जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न सक्थ्यो । उसको आफ्नै संविधान पनि थियो । आफ्नै संविधान र झन्डा भएको जम्मु–काश्मीर सात दशकअघि एउटा स्वतन्त्र देश थियो । अहिले जम्मु–काश्मीरका विभिन्न भाग भारत, पाकिस्तान र चीनले नियन्त्रणमा लिएका छन् । तर, धेरै काश्मिरीहरु अहिले पनि छुट्टै देश बनाउने सपना देख्छन् । भारत, पाकिस्तान र चीनजस्ता आणविक शक्तिराष्ट्रबीच रहेको जम्मु–काश्मीर स्वतन्त्र राष्ट्र हुने सम्भावना निकै कम छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको एउटा प्रस्तावले भारत प्रशासित काश्मीरवासीलाई उक्त सपनाबाट सधैँका लागि ब्युँझाइदिएको छ ।
अनुच्छेद–३७० परिवर्तन गरिनासाथ काश्मीर राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । विगतमा जम्मु–काश्मीरका जनताले मात्र पाउने विशेष सुविधामा आमूल परिवर्तन हुन पुगेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जम्मु–काश्मीरमा अहिलेसम्म विधानसभाबाट निर्र्वािचत मुख्यमन्त्री प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो । अब प्रदेशको शासन सीधै केन्द्र सरकारको हातमा हुनेछ । राज्यको शासन चलाउन गृह मन्त्रालयले उपराज्यपाल खटाउनेछ । अहिलेसम्म जम्मु–काश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्थ्यो, अब अन्य प्रदेशको जस्तै पाँच वर्षको मात्रै हुनेछ । तर, विधानसभाले मुख्यमन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । अर्को राज्य लद्दाखमा भने विधानसभा नै हुनेछैन ।
अहिलेसम्म केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन भारतभर एकैपटक लागू भए पनि जम्मु–काश्मीरमा त्यहाँको विधानसभाले अनुमोदन गरेपछिमात्र लागू हुने व्यवस्था थियो । अब केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन जम्मु–काश्मीरको विधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छैन । प्रदेशको अलग्गै झन्डा थियो, अब त्यो पनि खारेज भएको छ । धारा ३७० अनुसार जम्मु–काश्मीरको जग्गा सो राज्यभन्दा बाहिरका बासिन्दाले किन्न नपाउने व्यवस्था थियो । अब हरेक भारतीय नागरिकले जम्मु–काश्मीरमा जग्गा किन्न पाउनेछन् ।
अहिलेसम्म जम्मु–काश्मीरको राज्य सरकारअन्तर्गतका जागीरमा स्थानीय नागरिकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । अब सबै भारतीयका लागि खुला हुनेछ । काश्मिरी महिलाले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले काश्मिरी नागरिकको रुपमा पाउने सुविधा कटौती हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, काश्मिरी महिलाले पाकिस्तानी नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले काश्मिरी नागरिकको रुपमा पाउने सुविधा कायम रहने र पाकिस्तानी पुरूष पनि काश्मिरी हुनसक्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था रहने छैन, साथै काश्मीरका हिन्दुहरुले आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् । धारा ३७० को एउटा व्यवस्था भने कायम राखिएको छ । बाँकी रहेको कानुनी अंशअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।
काश्मीरको राजधानी श्रीनगरमा संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो धारा लागू भएपछि चार जनाभन्दा बढीको संख्यामा हिँड्डुलमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, जम्मुमा कफ्र्यु लगाइएको छ । विश्वविद्यालयका छात्रावास पनि खाली गरिएको छ । यसअघि नै अमरनाथ यात्रामा गएका हजारौँ दर्शनार्थीलाई फर्काइएको थियो । श्रीनगरसहित काश्मीर इलाकामा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द छ ।
श्रीनगरमा ल्यान्डलाइन फोनसमेत बन्द गरिएको छ । काश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्ती तथा क्षेत्रीय नेसनल कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोन आइतबार राति घरमा नजरबन्द गरिएका थिए । सोमबार उनीहरुलाई हिरासतमा लगिएको छ ।
काश्मीरमा हिंसात्मक संघर्ष गर्दै आएका पृथकतावादी समूहलाई भारतले आतंकवादी भन्छ र उनीहरुलाई पाकिस्तानले समर्थन गर्दै आएको भारतको भनाइ छ । ७० वर्षदेखि चल्दै आएको हिंसा समाप्त गर्न भारतले करिब सात लाख सेना परिचालन गर्दै आएको छ । तर, काश्मीरमा पृथकतावादी मात्र होइन, भारतीय राष्ट्रियता र संविधानमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरु पनि प्रभावशाली छन् । नेसनल कन्फरेन्स र पिडिपीजस्ता दलका नेताले विधानसभामा निर्वाचन जितेर जम्मु–काश्मीरको सरकार चलाउँदै आएका थिए । तर, सरकारको नयाँ कदमले निर्वाचनबाट जम्मु–काश्मीरको सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द भएको छ । अब जम्मु–काश्मीरको शासन मुख्यमन्त्रीले होइन, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट खटाइएका उपराज्यपालले गर्नेछन् । त्यसैले वैधानिक राजनीति गर्न चाहने राजनीतिक दलहरु भूमिकाविहीन हुने र त्यसले अशान्ति बढाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले, मोदी सरकारको कदमलाई भारतीय विश्लेषकहरुले नै ‘जोखिमपूर्ण कदम’ भनेका छन् ।
झन्डै सात दशक बितिसक्दा पनि काश्मीरमा जनमतसंग्रह नभएकाले भारतीय संविधानको धारा ३७० को व्यवस्था सान्दर्भिक नहुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीले उठाइरहेको थियो । हालजनमत संग्रहको कुरा चर्चामा नभए पनि काश्मीरका हिन्दुहरु लखेटिएकाले त्यसको कुनै अर्थ नहुने उसको तर्क छ । भाजपाले सन् २०१४ कै चुनावको घोषणापत्रमा आफूले जिते काश्मीरको विशेष मान्यता हटाउने र अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । धर्म र भाषाको आधारमा जन्माइएको पाकिस्तान–काश्मीर मुद्दामा ‘गर या मर’को अवस्था मोदी सरकारले निम्त्याएसँगै विचित्रको संकटमा फसेको छ । आर्थिकरुपले ठूलो समस्या भोगिरहेको आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तान काश्मीरको कारण बाध्यात्मक आतंकवादको चपेटामा पार्ने कोसिस पाकिस्तानमा हुन सक्ने खतरा ह्वात्तै बढेको छ । काश्मीर मामिलालाई लिएर अमेरिकाको साथ खोजिरहेको इमरान सरकार नचाहेर पनि नयाँ झमेलामा फस्ने खतरा बढेको छ । अमेरिका कश्मीर मुद्दामा नयाँ ढंगले खेल्न अवश्य चाहन्छ । अनिश्चितता र अन्योलमा सात दशक गुजारेको धर्तीको स्वर्ग पनि भनिने काश्मीरको समस्या मोदी सरकारको यो घोषणाले सुल्झाउँछ कि बल्झाउँछ हेर्न बाँकी छ ।
काश्मीर मुद्दालाई लिएर भारत शासित काश्मीर र पाकिस्तान शासित काश्मीरमा रहेका अनेक नामका आतंकवादी संगठनहरु फेरि एकपटक अमेरिकी राजनीतिको मोहरा बन्ने खतरा पैदा भएको छ । काश्मीरको नाममा आफ्नो साम्राज्य खडा गरिरहेका अनेक नामका आतंकवादी संगठनहरु ‘गर या मर’को अवस्थामा अमेरिकी राजनीतिको सिकार बन्न बाध्य मोदी राजनीति ठूलो अनिष्टबिना शान्त हुने कल्पना कम्तीमा अमेरिकी रणनीति बुझ्नेहरु मान्न तयार देखिँदैनन् । अमेरिकाको सन् २०२० मा सम्पन्न हुने राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिको सिकार काश्मीर राजनीति बनाइने खतरा पैदा भएको छ । काश्मीर समस्याको समाधान के र कसले खोज्ने ? भन्ने परस्परमा वैमनस्य पालिरहेका, विगतमा चारपटक युद्ध गरिसकेका भारत र पाकिस्तानले आफैँ खोज्छन् कि यसमा तटस्थ मध्यस्थता चाहिन्छ ? फेरि यस जटिलतामा चीन पनि अंशियार हो, किनभने जम्मु–काश्मीरको २० प्रतिशत भूभागमाथि उसैको कब्जा कायम छ । काश्मीर समस्याको स्थायी समाधान खोज्न जम्मु–काश्मीरको भूक्षेत्र, पूर्ववत् अर्थात् सन् १९४७ कै अवस्था हुनु नै न्यायसंगत हुन्छ र हुनु पनि त्यही पर्छ ।
धर्तीको स्वर्ग भनिने काश्मीर झेलम नदीसँगै बसेको छ । प्राचीन कालमा हिन्दु आर्य राजाको शासन रहेको काश्मीरमा मौर्य सम्राट् अशोकले बौद्ध धर्म र संस्कृतिको मुख्य केन्द्र बनाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । मध्ययुगमा मुसलमान शासक सुल्तान सिकन्दर बुतशिकनको सत्ता आरोहणसँगै काश्मीरमा जबर्जस्ती धर्मान्तरण गर्दै मुस्लिम बहुल बनाएको पाइन्छ । मुसलमान शाह, अफगान, कश्मिरी मुसलमान, मुगल वंश हुँदै काश्मीरको सत्ता सिख महाराजा रणजीत सिंहको हातमा पुगेको भेटिन्छ । मुस्लिम बहुल काश्मीर सन् १८४६ मा भएको पहिलो एंग्लो (सिख युद्धमा सिखहरुको हारपश्चात् अमृतसरमा सम्पन्न सन्धिको कारण ब्रिटिसको अधीनमा पुग्यो । तत्कालीन समयमा ब्रिटिसले पत्याएका जम्मुको राजा गुलाब सिंह काश्मीरको नयाँ शासक बने । ब्रिटिश सत्ताको मातहत गुलाब सिंहका वंशजहरुको शासन सन् १९४७ चलिरहयो ।
श्रीनगर, बडगाम, अनन्तनाग, पुलवामा, बारामुला र कुपवाडालाई प्रमुख जिल्लामा बाँडिएको काश्मीर बेलायती सत्ताको घर फिर्तीसँगै नयाँ समस्यामा फस्यो । १५ अगस्त १९४७ मा बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्रता प्रदान ग¥यो । बेलायती सत्ताले भारत छोड्ने क्रममा भारतलाई दुई भागमा बाँडी तत्कालीन समयमा भारतभित्र मौजुद अनेकौँ राज्यलाई भारत वा पाकिस्तानमा गाभिने वा स्वतन्त्र रहने भन्ने अधिकार दिइयो । अधिकांश राज्य भारतमा विलय हुन राजी भए भने जम्मु–काश्मीरका शासक महाराजा हरि सिंहले आफ्नो देश स्वतन्त्र रहने निर्णय गरे । मुस्लिम बहुल काश्मीर राज्य पाकिस्तानमा गाभिने इस्लामाबादको अपेक्षा पानीको फोकामा परिणत भयो ।
२० अक्टोबर १९४७ मा पाकिस्तानी सेनाको समर्थनमा ‘आजाद काश्मीर सेना’ले काश्मीरमा आक्रमण ग¥यो । राजा हरि सिंहले हिन्दुत्वको हवाला दिँदै भारतसँग सहयोग मागे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा हरि सिंहलाई भारतमा विलय हुन आग्रह गरे । तत्पश्चात् २६ अक्टोबर १९४७ मा राजा हरि सिंहले नेहरूसँग एक सम्झौता गर्दै काश्मीरको रक्षा, विदेश र सञ्चार भारतको जिम्मा लगाए । उक्त सम्झौतापश्चात् भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० जम्मु–काश्मीरमा लागू गर्न राजा हरि सिंह राजी भए । तर, पाकिस्तानी सेना रहेको भूभाग पाकिस्तानमै रह्यो । काश्मीरलाई स्वतन्त्र राज्य राख्ने मनसुवा लिएका त्यहाँका तत्कालीन राजा हरि सिंह अत्तालिएर पाकिस्तानबाट काश्मीर बचाइमाग्न दिल्लीसँग सहयोगको याचना गर्न पुगे । पाकिस्तानको दाबी र हमला तथा हरि सिंहको भारतसँग याचनासँगै काश्मीरको भावी मानचित्र कोरिँदै थियो ।
भारतले काश्मीर भारतीय गणसंघमा सामेल भएमात्र पाकिस्तानविरूद्ध कारबाही गर्न सक्ने सर्त राख्यो । हरि सिंहसँग कुनै अर्को विकल्प थिएन, उनले जम्मु–काश्मीरलाई भारतीय गणसंघमा सामेल गर्ने ‘इन्सट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’मा हस्ताक्षर गरे । त्यसलगत्तै भारतले आफ्नो सेना परिचालन गरेर काश्मीरभित्र पसेका पाकिस्तानद्वारा भाडामा प्रयोग गरिएका कबाइलीविरूद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको थियो । २२ अक्टोबर १९४७ देखि भारत र पाकिस्तानको बीच काश्मीर मुद्दालाई लिएर अनेकौँ झगडा सम्पन्न गरिएका छन् । सन् १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ मा युद्धसमेत लडिसकेका यी दुई मुलुक काश्मीर मुद्दामा फेरि एकपटक आमनेसामने हुने अड्कलले जोड पाएको छ ।
भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध भयो । युद्ध चलिरहेका बेला नेहरूले कास्मीरको विषय सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे । राष्ट्रसंघले पाकिस्तानलाई आफ्ना घुसपैठियाहरु फिर्ता गर्ने र भारतले पनि आफ्ना सेना कम गर्नुपर्ने निर्णय ग¥यो । स्थिति साम्य भएपछि काश्मीरले भारत र पाकिस्तानमध्ये कुनमा मिसिने वा स्वतन्त्र देश रहने निर्णय जनमतसंग्रहबाट लिने प्रस्ताव ग¥यो । भारत र पाकिस्तान दुवै मुलुक उक्त प्रस्तावमा सहमत भए । भारत र पाकिस्तानबीच युद्धविराम भएपछि आआफ्ना सेनाको कब्जामा रहेको भाग दुवै देशले आफूसँगै राखे । अर्काको कब्जामा रहेको भाग पनि आफ्नो भएको दाबी गरिरहे ।
जोखिमपूर्ण बनेको सडक यात्रा
सुकुमबासी बस्तीमा वृक्षरोपण